Onye maara ihe maara ihe ọ ga-ekwu. Onye maara ihe ma ka okwuru ya. - Amaghi ama - Quedia Pedia
A onye ma ihe bu mmadu Onye ma ihe okwesiri ikwu n’okpuru ọnọdụ ọ bụla. Ahụmahụ o nwetaworo na ndụ na-eme ka ọ nwee ihu ọma n'ebe ndị ọzọ nọ ịtụ anya ọnọdụ ọ bụla ma mee ya. Ọ dị mkpa ka anyị mụta ihe site na ndụ anyị ma jiri amamihe dozie mmejọ nke anyị mehiere n'oge gara aga.
Onye dibia a ma ama na onye na-eche echiche Albert Einstein kwuru otu oge na onye na-emeghị mmehie ọ bụla anwalebeghị ihe ọhụụ. Okwu ndị a dị mfe pụtara n'ezie ma ọ bụrụ na ejiri nlezianya chebara ya echiche. Anyị kwesịrị inwe onwe anyị ma jiri ya mee ihe iji na-agbanwe ọnọdụ dịka anyị si ahọrọ.
Mgbe ụfọdụ, nke a na-adị mkpa mgbe ọtụtụ nsogbu gbara anyị gburugburu, ma ọ ga-eyi ka ọ ga-akwụsị. Readinggụ akwụkwọ na iji mkpịsị mara oke na-enwe mkparịta ụka na-amị mkpụrụ ga-enyere anyị aka itolite n’onwe anyị na ndị mmadụ.
Anyị kwesịrị iwepụta oge niile anyị chọrọ iji nyochaa mkpebi onwe anyị na ichebara ya echiche. Iji bụrụ onye maara ihe, na mbido, ị kwesiri inwe amamihe.
Amamịghe ọ bụghị nanị site n’iji ejiji dị mma n’inwe njiri mara mma, kama, ọ na-esite n’uche ma mechaa mee ka ahụ na mkpụrụ obi dị ọcha. Ọ na - emegharị anya mgbe niile ma na - enyere ndị mmadụ aka ịlaghachi na nsogbu ha site n'ịzụlite ezigbo ndụ gaa na ndụ.
Ntụgharị uche na ụra kwesịrị ekwesị, yana nri na yoga dị mma, nwere ike ịba uru na anyị ijide onwe anyị ma chikwaa oge ihe isi ike. Cheta na ndi mmadu kwesiri ilekwasị anya mgbe nile ibi ndu nke onwe ha kama ibi ndu ndi ozo.
Mkpebi na nhọrọ ndụ anyị niile ga-abụ naanị ndị echiche na ọgụgụ isi na-eduzi ya. Anyị ekwesịghị igbu ndụ anyị site na naanị ịgbaso iwu na echiche ndị ọzọ.
Ihe ziri ezi ma ọ bụ ihe na-ezighi ezi, ndụ ga-, na njedebe, ga - enyere anyị aka mgbe niile ị kachasị mma. Onye maara ihe ga na-ege ntị karịa mgbe niile ma ọ na -ekwu okwu, yabụ mara n'ezie mgbe ọ ga-ekwu okwu, ebe aga-ekwu ya, na ma ekwuru okwu ma ọ bụ na ọ gaghị ekwu. Ndopu bụ ihe dị ike karịa okwu.
Smartbụ Smart Quotes
Ezi Onye Quotes
Akụkụ mmepe onwe onye
Nhota Uto Onwee
Akụkụ mkpali mmụọ
Mmetụta ndị mmadụ
Quater Smart Man
Quater Smart people
Quater Smart mmadu
Nwoke Nwere amamihe
Nwoke maara ihe kwuru
Onye amamihe mara
Ndụ dị mkpụmkpụ ibibi otu sekọnd na onye na-enweghị ekele maka gị. - Amaghi ama
Ndụ dị mkpụmkpụ ibibi otu sekọnd na onye na-enweghị ekele maka gị. -…
Enwere m olileanya na onye ọ bụla nwere ike ịchọta ìhè na akụkụ ndị kachasị njọ nke uche ha. - Amaghi ama
Enwere m olileanya na onye ọ bụla nwere ike ịchọta ìhè na akụkụ ndị kachasị njọ nke uche ha. - Isi okwu ndi amaghi ama:
Bee onwe gi nwayọ. Na-eme nke ọma karịa ka i chere. - Amaghi ama
Ghapu nkpuru onwe gi dika onye nzuzu ma nwee obi ike n’ebe aka gi di I nwere ike iche na ị…